Ezona ntlobo zentshebe ngokwemo yobuso | Amadoda aQinisekileyo
Lkwiqhina elipheleleyo: Kulabo bakhulisa iindevu kwaye abazi ukuba oko kuya kulungela i-aesthetics yabo, okanye kwabo bakhetha isitayile esibukhali ngakumbi, ibhokhwe ejikeleze umlomo ilunge kakhulu kuzo zonke iintlobo zobuso, ngaphandle kwabo banobugqwirha isilevu esibiziweyo.
Iindevu: Olu lolunye umahluko weqhina. Ingathatha iifom ezahlukeneyo, kwaye inokuhamba kunye okanye ngaphandle kwamadevu.
Ibhokhwe nebhokhwe: Zihamba kakuhle kakhulu kubuso obujikelezileyo okanye obusisikwere kuba zibenza bude ubuso, ukuba azixinekanga.
Iindevu zeentsuku ezintathu: Iindaba ezimnandi zamadoda athiyileyo ukucheba. Nangona kunjalo, ifuna ulondolozo ukuze ingakhange ibonakale ikrwada kakhulu, kwaye ke ayisijiki kwiindevu ezigugileyo. Ikwaluhlobo lweendevu ezihambelana kakuhle nabo bonke ubuso, kodwa loo nto inokukwenza ube mdala ukuba uneenwele ezingwevu.
Iindevu eziqingqiweyo: Kulabo bafuna iindevu ezizodwa kunye nezakho, intshebe eqingqiweyo isisombululo. Kodwa kufuneka ube nezinto ezichanekileyo ukuze usike imigca. Iziphumo kufuneka zicoceke nakweyiphi na imeko. Le ntshebe ifuna ulondolozo lwemihla ngemihla kwaye ilungele amadoda anenwele ezininzi.
Ukutshiswa kwexesha elide: Yinto yama-60s kunye nama-70s. Olu hlobo lokujonga luyadimazeka kubuso obujikelezileyo kuba lubenza babonakale betyebile, nangona kunjalo isebenza kakuhle kubuso obucekeceke kuba balinganisa ubude bobuso. Ungadlala ngobude kunye nobungqindilili ukuze ufumane inkangeleko elungele imeko yobuso bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ezona ntlobo zentshebe ngokwemo yobuso
Iingcebiso zokunxiba izihlangu zikaGqirha Martens